अर्नाको रा'जधानी मानिने कोशी टप्पुमा बढे अर्ना, दुर्लभ अर्ना हेर्नकै लागी आउने ग'र्छन कैयौँ मुलुकबाट पर्यटक -
Homeसमाचारअर्नाको रा’जधानी मानिने कोशी टप्पुमा बढे अर्ना, दुर्लभ अर्ना हेर्नकै लागी आउने ग’र्छन कैयौँ मुलुकबाट पर्यटक
अर्नाको रा’जधानी मानिने कोशी टप्पुमा बढे अर्ना, दुर्लभ अर्ना हेर्नकै लागी आउने ग’र्छन कैयौँ मुलुकबाट पर्यटक
धरान- सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जि’ल्लामा फैलिएको अर्नाको राजधानी मानिने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष’मा पछिल्लो समयमा अर्नाको सङ्ख्या’मा वृद्धि भएको छ । चार वर्षअघिको तुलनामा आरक्षमा १२ दशमलव नौ प्रतिशतले अर्नाको सङ्ख्या बढेको आरक्षण प्रशासनले जनाएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको कार्यालयले वैशाख ६ देखि ११ गतेसम्म अर्ना गणना गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग काठ’माडौँका सहायक इकोलोजिष्ट हेमराज आचार्यको नेतृ’त्वमा गणना गरिएको थियो ।
गणना प्रति’वेदन अनुसार ५७ वटा अर्ना बढेको पाइएको छ । कोशी’ टप्पुभित्र अर्नाको कूल सङ्ख्या ४९८ पुगेको छ । विसं २०७४ मा भएको गणनामा आरक्षभित्र ४४१ वटामात्र अर्ना रहेका पा’इएको थियो । विसं २०३२ मा स्था’पना भएको कोशी टप्पुमा शुरुमा ६३ वटामात्र अर्ना रहेका थिए । त्यसयता क्रमशः अर्नाको सङ्ख्या’मा वृद्धि हुँदै गए पनि उचित संरक्षणको भने अ’भाव हुँदै गएको आरक्षको प्रशासन बताउँछ ।
प्रतिवे’दनमा अर्नाको बासस्थानको सुधार गर्नुपर्ने, अनाधिकृत रुपमा रहेका घरपालुवा भँैसीहरु हटा’उनु पर्ने, मानिस र जनावरका बीचमा हुने गरेको द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने अवस्था निर्माण गर्न भनिएको छ । अर्नाजस्ता देखिने भैँसीहरुको बाहु’ल्यताले आरक्षमा रहेका सक्कली अर्नालाई चरनको पनि अभाव हुँदै आएको छ । जसका कार’ण यी अर्नाहरु नै गाउँ पस्ने गरेका छन् । गाउँ पस्दा मानिससँग द्वन्द्व पनि हुने गरेको छ । यसरी भए’को द्वन्द्वमा परेर हालसम्म १० वटा अर्ना मरेको जानकारी आरक्ष प्रशासनले गराएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार संरक्षित प्रजाती, सङ्क’टापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण म’हासन्धी एपेण्डिक्स् थर्ड मा सूचीकृत तथा आई. यु.सि.एनको इनडान्जेरेड सूचीमा रहेको दुर्लभ वन्यजन्तु अर्नाको संर’क्षणको गर्ने उद्देशयले २०३२ सालमा आरक्ष’को स्थापना गरेको हो ।
कोशी टप्पु विश्वमै दुर्लभ वाइ’ल्ड वाटर बफेलो (अर्ना) का लागि प्रख्यात छ । आरक्षको कार्यालयले दुर्लभ अर्नाको सङ्ख्यामा हँुदै गएको वृद्धिलाई महत्व’पूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको छ । संरक्षण अधिकृत अशोक रामका अनुसार आर’क्षमा वयश्क भाले अर्नाको सङ्ख्या २ सय २१ वटा रहेको छ । त्यसैगरी वयश्क पोथी अर्ना १ सय ६२ वटा र अर्ध वयश्क अर्ना ४८ वटाको सङ्ख्यामा रहेका छन् । यस्तै आरक्षभित्र दुई वर्ष उमेर’सम्मको अर्नाको बच्चा ३५ वटा छन् । अर्ना गणनाको क्रममा एक वर्ष सम्मको बच्चा ३२ वटा भेटिएको थियो । विसं २०७३ मा कोशी टप्पुबाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा १३ वटा लगि’एको थियो । ती अर्ना निकुञ्जको इन्क्लो’जरमा राखिएको छ ।
घरपालु’वा भैँसीहरुको पूर्वज मानिने अर्ना नेपाल, भारत, भुटान, कम्बोडिया, थाइल्याण्डमा पाइन्छ । विश्वको करिव ८२ प्रतिशत सङ्ख्या भारतको काजिरङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्ज’मा छन् । दोश्रो ठूलो सङ्ख्या कोशी टप्पुमा रहेको यस आरक्षले जनाएको छ । विसं २०३२ मा स्थापना भएको आर’क्षको क्षेत्रफल १७५ वर्ग किलोमिटर मात्र रहेको छ । आरक्षमा रहेका जंगली जनवारको अनुपातमा यो क्षेत्र अत्यन्तै न्यून हो । सरकारले २०६१ सालमा आसपा’सको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेको थियो । यसको क्षेत्रफल १७३ वर्ग किलोमिटर पर्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका, कंकालिनी हनुमान गरपालिका, सुनस’रीको कोशी गाउँपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका केही वडा’हरु पर्दछन् ।
यहाँ रहेका अर्ना विश्वमा दुर्लभ मानि’न्छन् । दुर्लभ अर्ना हेर्न विश्वका कैयौँ मुलु’कबाट पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । यो आरक्ष नदीको बालुवाबाट बनेको टप्पु भएको कारण यहाँ प्रायः सिसौ र खयरको जंगल पाइन्छ । हाँसका विभिन्न जातहरू, दुई किसिमका ला’लसर र धेरै किसिमका बकुल्ला, गरुड, सारस र अन्य पानी चराहरू समेत गरी करिब ४९० प्रजा’तिका चरा यहाँ पाइने गरेको संरक्षण अधिकृत रामले जानकारी दिनुभएको छ ।
विश्व&भरका चरा यहाँ पाइने भएकाले यसलाई चराहरुको राजधानीको रुपमा पनि चिनिँदै आएको छ । जैविक विविधता भएको आरक्षलाई सन् १९८७ मा रामसार सूचीमा समा’वेश गरिएको थियो । यस आरक्षलाई उत्तरमा चत’रा क्षेत्र र कोशी नदी तथा उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा क्षेत्रमा विस्तार गरेर टप्पु क्षेत्रको खाली जग्गा आरक्षणमा परिणत गरे यहाँका जंगली जनावरको संर’क्षणमा थप सहयोग पुग्ने माग आरक्ष प्रशासनले गर्दै आएको छ ।
जलचरह’रूमा घडियाल तथा मगरगोही, सोंस र विभिन्न किसिमका माछाहरू यस आरक्षका वि’शेषता हुन् । चरा अवलोकन गर्न इच्छुक पर्यटकहरूले यस आरक्षमा दैनिक भ्रमण गर्दै आएका छन् । पर्यटनको माध्यमबाट स्थानीय समुदायमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना भएको छ । आरक्ष’को आम्दानीबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षण, विकास तथा आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चा’लन हुँदै आएका छन् ।
घाँसे मैदान, खयर, साल तथा सिसौ लगा’यतका वनस्पतिहरू पाइन्छन् । काोशीटप्पु क्षेत्रमा जंगल सफारी गर्न सकिन्छ । यहाँका बनस्पति, चरा तथा जनावरह’रुको अवलोकन गर्न जंगल सफारी हुने गर्दछ । लोपोन्मुुख अवस्थामा रहेका अर्ना (जंगली भैँसी) हरू अन्य २० प्रकारका साना ठूला जनावरहरू जस्तैः हरिण, रतुुवा, नील’गाई, बँदेल, बाँदर, अजिंगर आदि यहाँ पाइन्छन् । आरक्षणले दिएको जानकारी अनुसार विश्वमा नै दुुर्लभ मानिएका ४४१ प्रजा’तिका चराचुुरुङ्गीहरू, हाँस प्रजातिका २० वटा, जलचरा प्रजातिका ११४ वटा पंक्षीहरू, कोशी नदीमा ८० प्रजातिका माछाहरू र दुुर्लभ घडियाल गोही तथा ग्यांगेटिक डल्फिन पाइने गरेको छ ।
आरक्ष’मा प्राप्त सेवा सुविधा
कोशी टप्पु आरक्ष विराट’नगरबाट ५० किमी उत्तरपश्चिममा पर्छ । काडमाडौँ–वि’राटनगर जहाजमा आएर साना गाडीबाट यहाँ पुग्न सकिन्छ । धरानबाट धरानबाट ४० किमी पश्चिम दक्षिणमा पर्छ । यहाँबाट ठूला शहर इटहरी, धरान र विराटनगर नजिक पर्छन् । राम्रो सेवा सुविकाका लागि पर्यटकहरु घुमेर ती शहरह’रुमा गएर बस्न सक्छन् । यहाँ पनि स्तरीय विदेशी पर्यटक’हरुका लागि यहाँ कोशी टप्पु वल्ड लाईफ क्याम्प, कोशी टप्पुु वल्र्ड बर्ड वाचिग क्याम्प र कोशी क्याम्प गरेर तीन वटा होटलहरु छन । कु’साहामा अन्य साना केही होलट लज पनि छन् । होमस्टे सेवा पनि यहाँ उप’लब्ध छ ।
यहाँ कात्तिकदेखि फा’गुुनसम्म अर्ना र चराको संसार घुुमघाम र दृश्याव’लोकनका लागि बढी उपयुुक्त पाइन्छ । यो याममा युरोप अमेरिकलगायतबाट अत्याधिक पर्य’टकहरु आउने गरेका छन् । तर विगतका बर्षदेखि कोरोना महा’मारीका कारण विदेशी पर्यटकहरु घटेको आरक्षण प्रशा’सनले जनाएको छ । ओएस नेपालबाट
फेरी के भयो ? निशेधाज्ञाको बे’वास्ता गर्दै सिर्जना वाग्ले सहितको समूहले लक्ष्मी गदार माथि गर्यो भौतिक आ’क्रम ण (भिडियो हे’र्नुहोस)
पूर्वमिस नेपाल श्रृंखलाले मना‍इन् शिरुवारीमा जन्मदिन,उनी कति वर्ष पुगिन् त?हेर्नुहोस्
November 6, 2020 admin समाचार 4413
पूर्वमिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले प’र्यटकीय गाउँ शिरुवारीमा जन्म’दिन मनाएकी छन्। खतिवडाले २५ औं जन्मदिन मना’एकी हुन्। खतिवडा मिस नेपाल’सहित मिस वल्र्ड टप १२ पनि हुन्। २०१८ का मिस नेपाल खतिवडासहितको १३ जनाको स’मूह शिरुवारीमा ३
April 9, 2021 admin समाचार 719
February 18, 2021 admin समाचार 2061
नेपाली लोक दोहोरीमा यो समय नया प्रतिभाको आ’गमन भएको पक्का देखिन्छ तर पुरानो कला’कारहरुको कसैले खोजि गरेको देखिन्न र स्वाभा’विक पनि हो पुराना हराएका कलाकारहरु कहाँ छन भन्ने अत्तो पत्तो हुन्न किनकि उहहरुनै सम्प’र्कमा आउदैनन
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (175162)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (168883)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (168669)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (168295)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (167290)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (166067)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (165516)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (163992)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158587)